Nepali Rajneeti | ….त्यसपछि निताको मृ’त्यु भयो
….त्यसपछि निताको मृ’त्यु भयो
माघ २३, २०७७ शुक्रबार १९९ पटक हेरिएको
यसका वारेमा घरि घरी परिभाषा दिनु राम्रो नहोला । अव हुँदाहुँदै सहवास यो हो भनेर जानकारी दिने हो भने त झन त नावै होला । यसको मतलव यो कुरावाट सवै परिचीत छन ।
मानिस मात्रै होईन जनावर, पशुपक्षिं देखी सवै जसो । भरपुर स’न्तु’ष्टिका लागि मस्तिष्क र श’री’रका’बीच तालमेल एकदमै आवश्यक छ ।
सु’ख च’रम अवस्थामा त्यतिबेला पुग्छ, जतिबेला पार्टनरहरुकाबीच श’री’र एवं मस्तिष्कमा एक आपसमा एकाकार हुन्छन ।
एकको आनन्द अर्कोलाई आनन्द देओस र एकको स’न्तु’ष्टि दोस्रोको चरम स’न्तु’ष्टि बन्न सकोस । मान्नुहोस्, सेक्सको असिम आनन्दले तपाईलाई हर्षविभोर बनाउनेछ ।
हरेक ब्यक्तीले आफ्नो यौ’ न जीवन सुखद होस् भन्ने कामना गर्दछन् । यसका लागि उनिहरुले अनेक प्रयत्न पनि गर्दछन् । अहिलेको समयमा या ैन उ’त्ते’ना’को लागि अनेक अ’ाैष’धि’समेत उपल्बध् छन । यस्तै एक जोडिले शा’रि’री’क सु’खका लागि पहिले औ’ष’धी’को से’वन गरेर शा’रि’री’क सु’खको कार्यमा रहे ।
तर दुर्भाग्य यसका कारण युवतीले ज्यान गुमाउन पुगिन् । शा’रि’री’क सु’ख’भो’ग प्राकृतिक कुरा हो भन्ने जान्दा जान्दै यसको प्राकृतिक नियम विपरीत जाँदा मानिसको जीवन आनन्दमय हुनुको साटो कष्टसाध्य हुने मात्र हैन मृत्युका मुखमा समेत पुग्दछ ।
भारतको गुजरातका २६ वर्षिया युवक किशोर गुप्ताले औ’ष’धि से’व’न गरेर आफ्नी केटी साथी नितासँग शा’रि’री’क सुखभाग गर्दा निताको मृत्यु भएको हो ।
गुप्ताले सो औ’ष’धि खा’एप’छि आफुलाई थाम्न नसक्दा मृत्यु भएको गुजारत प्रहरीले जनाएको छ । किशोरको बयानलाई आधार मान्दै भारतीय मिडियाले लेखेका छन्‘ निता र किशोरबीच नियमित शा”रि’री’क सु’ख’भो’ग हुने गरेको भएपनि मङगलबार किशोर किशोरीले नै औ’ष’धि खा’ए’र शा’रि’री’क सु’ख’भो’ग लिन थालेका थिए ।’
अ’त्या’धि’क इ’च्छाले युवकको ह’र्कत ति’ब्र ब’न्यो र युवतीको गो’ ‘प्य अं’ग’मा चो’ट पु’गेपछि मृत्यु हुन पुगेको बताएको छ । सहवास गर्दा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् ।
आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । आखिर अधिकांश महिला किन यस्तो आवाज निकाल्छन् ?
के यस्तो आवाज आनन्दको अभिव्यक्ति हो या मनोरञ्जनको चरम अवस्था ? यसबारेमा केही वैज्ञानिकले आवाज निकाल्नु नाटक मात्र हो भनेका छन् भने केही अनुसन्धानकर्ताहरूले आनन्दको अनुभूति हो भनेका छन् ।
साथै केहीले सहवासको समयमा महिला अचेत अवस्थामा पुग्ने भएकाले यस्तो आवाज निकाल्ने जनाएका छन् । तर यसबारे पछिल्लो अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्ष भने अलि फरक छ ।
सहवासको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उ’फ… आ’ह… या’ आ’उ’च… जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ ।